मन्त्री यादवले तीन सचिवको नाम तोकेर कारबाही गर्न भनेपछि… – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ३१ मंगलवार, ०६:४२
२०७६ असार २५ गते प्रकाशित, l ११:४९
रिपोर्टर्स नेपाल विशेष । २४ असारको विहान ब्रेकफाष्टसहित डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुरुमै तरकारी र फलफूल परीक्षणको विषयले प्रवेश पाएको थियो । भारतबाट आयातित तरकारीको सीमामा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव लाने उद्दोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले शुरुमै कडा भनाई राखे । उनले प्रस्ताव लानुअघि देखि लगेपछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रस्ताव आफूले लगेकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने तर आफूलाई गुमराहमा पार्ने सचिवहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिए । उनले वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फको जिम्मेवारी लिएका सचिव केदार बहादुर अधिकारी, कृषि सचिव युवकध्वज जी.सी. र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जम्मेवार सचिवहरुको नाम तोकेरै कारबाहीको विषय उठाएका थिए । प्रस्ताव लान प्रेरित गर्ने देखि यथार्थ जानकारी नगराई चुप लागेर बसेको भन्दै सचिवहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।
आफ्नो भनाई राखेर मन्त्री यादव बैठकबाट निस्किएका थिए । कर्मचारीले गुमराहमा पारेर पूर्वाधार तयार विना तरकारी परीक्षणको निर्णय भएको बताए । मन्त्री यादवले सचिवहरुप्रतिको आक्रोश ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अन्तवार्ताका क्रममा समेत पोखे । सचिवहरुलाई साहबहरु भन्दै किन सही सल्लाह नदिएको भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्री बनेर आएको केही समयपछि तरकारी परीक्षणको विषयमा भएको निर्णयलाई तत्कालिन सचिवले सामान्य प्रक्रिया हो भनेपछि सही गरिदिएको खुलासा गरे । सचिवहरुको बढी विश्वास गर्दा गम्भीर त्रुटीपूर्ण निर्णय भएको बताए ।
यता, तरकारी प्रकरणमा भारतको दबाबका कारण परीक्षण रोकिएको भन्ने बजार हल्ला तातेको छ । त्यसमाथि भारतीय राजदूतावासले सरकारलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र सचिवको हातमा पुगेको थियो । तर, कसरी सार्वजनिक भयो ? मन्त्री यादवले आफ्नो हातमा समेत पत्र नआएको बताए । धमलासँगको अन्तवार्तामा पत्र मिडियामा बाहिर आएपछि मात्र हातमा परेको खुलाए । सचिवको हातमा पुगेको पत्र कसरी बाहिरियो ?
कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी कुनै राष्ट्रका तर्फबाट राजदूतावासले पठाएको पत्र बाहिरिनुले सरकार समस्यामा परेको छ । त्यो पत्र बाहिर ल्याउने को हुन् ? यसबारे समेत मन्त्री यादवबाट मात्र नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट पनि चासो बढेको छ ।
बाढि-पहिरो पीडितलाई राहत दिने निर्णय, घाईतेको सम्पूर्ण उपचार सरकारले व्यहोर्ने
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक, भारतीय दूतावासको पत्र आएको स्वीकार
मन्त्रीहरु कोही अनुपस्थित, कोही बीचमै छाडी हिंडे
बालुवाटारमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक ,केही मन्त्रीहरुका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक अन्तिम हुनसक्ने
भोलि विहान ७ बजे आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक, मन्त्रीहरुलाई खाना खानेगरि बोलाईयो